Madaxweynaha Galmudug Qoor-Qoor oo la kulmay Hogaamiyaha Ahlu Sunna - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Galmudug Qoor-Qoor oo la kulmay Hogaamiyaha Ahlu Sunna
Madaxweynaha Galmudug Qoor-Qoor oo la kulmay Hogaamiyaha Ahlu Sunna
Wararka ka imanaya dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) uu la kulmay hoggaamiyaha Guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan.
Kulankan oo yimid kadib markii uu Hoggaamiyaha Ahlu Sunna uu sheegay inay tanaasuleen oo ururka Ahlu Sunna ka baxayo arrimaha Siyaasadda ayaa Madaxweynaha Galmudug waxa uu ka mahadceliyay mowqifka cusub ee ururku uu qaatay.
Hoggaamiyaha Guud ee Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa dhankiisa waxaa uu sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta Madaxda Galmudug.
Hase yeeshee,kulankan ayaan ka dhex muuqan Sheekh Maxamed Shaakir oo hore u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Galmudug.
Dagaal dhex maray ciidamada Ahlu Sunna iyo ciidamada dowlada ayaa waxaa uu sabab u noqdey in Ciidanka Dowladda Soomaaliya ay la wareegaan Xarunta Inji oo aheyd fariisinka weyn ee hoggaanka Ahlusunna iyo hbkii iyo Ciidamadii Ahlusunna.
Madaxweynaha Jubbaland oo guul taariikhi ah ku tilmaamay ansixinta heshiiska doorashada
Xildhibaanada Labada Aqal oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay heshiiskii doorashada
Akhriso: Madaxweyne Farmaajo oo codsi u diray Baarlamaanka labada Aqal